Goatemala: Ny fomba hanehoan’ny indizeny ny zavakanto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Oktobra 2018 4:49 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Italiano, 繁體中文, 简体中文, English
Sary avy amin'i Amauri Aguiar ary nampiasana lisansa Creative Commons
Nisy ny fankalazana ny vahoaka tompotany sy ny fomba hanehoan'izy ireo ny mari-panondroany azy tamin'ny alalan'ny famoronana ara-javakanto nandritra ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vahoaka Indizeny Manerantany. Miatrika fanavakavahana, fahantrana faraidiny ary fanilikilihana ara-tsosialy isan'andro ireo vondrona ireo, tsy any Goatemala ihany, fa matetika manerantany. Na izany aza, mikasa ny haneho ny fomba hizaran'ireo vahoaka indizeny ao Goatemalà ny fomba fanehoany ara-javakanto ity lahatsoratra ity.
Comalapa dia toerana manokana ho an'ny vahoaka indizeny ao Goatemala, malaza amin'ireo mpanao sary hosodoko sy ny manam-pahaizana hajaina manerana izao tontolo izao:
Nanomboka tamin'ny taompolo 1930 izany rehetra izany, rehefa liana tamin'ny hosodoko i Andrés Curruchiche, ary nahafahany naneho ny asa famoronany tany Etazonia. Tao amin'io firenena avaratra io, nanamontsana ny isan'ny mpitsidika betsaka indrindra izay 123.000 i Curruchiche, izay noraiketin'ilay mpanao hosodoko Pablo Picasso tamin'ny fampiratiana nataony. Ny fahombiazan'ilay mpanao sary hosodoko Comalapan manerana izao tontolo izao sy manerana ny firenena tamin'ny zavakanto nentim-paharazana no nanolorany tena ho an'ny vahoakany, ka nanomboka nampianatra ny taranaka hoavy izy noho izany. Nahitana mpanao sary hosodoko miisa 15 ny taranaka faharoa, nahitana vehivavy ny taranaka fahatelo, ary nanova ny endrika nentim-paharazana izy ireo ho endrika surrealiste (fifangaroan'ny endri-tanana sy ny nentim-paharazana).
Indro ny rohy mankany amin'ny Naiftenango, bilaogy iraisana iray natokana ho an'ny “zavakanto tsontsa na nentim-paharazana” any Goatemalà, izay nandraketan'ny ekipa horonantsary fohy tao amin'ny trano fampirantian'i Curruchiche, izay tantanan'ny zafikeliny ankehitriny, mpanao sary hosodoko ihany koa.
Zava-dehibe ny mahafantatra fa misy vondrona samihafa ao Goatemala raha maro ireo vondrona tompotany mizara olana toy izany. Efa mpifaninana teo aloha ny sasany amin'izy ireo ary tsy mitovy fiteny. Na izany aza, nahavita nampifandray ireo vondrom-piarahamonin'ny indizeny roa ny teatra an-dalambe ary nitondra ny tanora hiara-hiasa. Tohanan'ny “La Cambalacha “, fikambanana iray manampy ireo vondrom-piarahamonin'ny tompotany akaikin'i Atitlan ireo vondrona ireo :
Ny tanora Kakchikel avy ao San Marcos la Laguna sy ny tanora Tzutujl avy ao San Pablo La Laguna no namorona ny tarika. Na dia niady nandritra ny taonjato maro aza ireo vondrom-piarahamonina roa ireo dia ezaka manokana izany noho ny fotoana nifampizarany nandritra ny famerenana ny tantara an-tsehatra, sy rehefa nanao fampisehoana izany ho an'ny vondrom-piarahamoniny ihany koa izy ireo.
Saingy angamba ny fitafiany no fanehoana ara-javakanto sy ny ara-mari-panondroana tena mahavariana, mahahinana sy ahaiza-mamorona indrindra ho an'ireo vahoaka indizeny. Mbola maro ny vehivavy mitafy lobaka nozairina tanana tsara tarehy antsoina hoe huipiles. Tsy mahita maodely roa mitovy ianao, ary maneho ny tenany amin'ny alàlan'ny famoronana maodely vaovao ny vehivavy, ny endrika vaovao izay milaza ny tantara momba ny vorona sy ny voninkazo, toy ny fitsangatsanganana ao anaty trano fampirantiana zavakanto :
Nanamafy i Supango :
Mijanòna ary saintsaino ireo antsipiriany kely sy tsy tambo isaina amin'ny fitafian'ny indizeny, fa mety hanokatra ny saintsika izany. Andao hojerena ny hatsaran-tarehy sy ny harena anatiny bebe kokoa, fa aoka isika tsy hiandry olona avy any ivelany hampijery antsika izany.